Home CLASSIC FOOTBALLER Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
LB waxay soo bandhigaysaa sheeko dhamaystiran oo ah Roma Legend ugu wanaagsan ee loo yaqaan naaneyska; "Gladiator". Our Francesco Totti Storyhood Plus Qodobbada Lahaanshaha Xogta waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor taariikhda qoyska, asalka qoyska, nolosha xidhiidhka iyo xaqiiqooyin kale oo OFF-Pitch (wax yar oo la yaqaan) oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walba waa ogyahay inuu ahaa naadiga kaliya ee Roma u ciyaaray intii uu kubada cagta ciyaarayay. Si kastaba ha ahaatee, kaliya dhowr ciyaaryahan ayaa ka fiirsaneysa Bastos Francesco Totti. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Nolosha Hore
Francesco Totti ayaa ku dhalatay maalinta 27th ee September 1976, Rome, caasimadda Talyaaniga.
Francesco wuxuu ku dhashay hooyadiis, Fiorella Totti (oo ah xannaane adag) iyo waalidkii Lorenzo Totti (oo ah karraanigii hore ee bankiga). Waalidiinta Totti ee sawirrada hoos ku qoran la yiraahdo waa Talyaani iyo rumaysadka Roomaanka ee Katooliga.
Totti ayaa ku soo koray walaalka walaalkiis Riccardo Totti. Labadaba waxay ku kiciyeen xaafadda Porta Metronia ee magaalada Rome.
Hadal Weyn: Nasiib darro, nasiib darro, ma helin inuu ogaado awoowe sababtoo ah wuxuu geeriyooday markuu ahaa wiil yar. Si kastaba ha ahaatee, awowgiis ayaa ka tagay hadiyad weyn. Hadalkaasi wuxuu ahaa "Massive Roma Fan". Gianluca Totti ayaa aqbalay jaceylka uu u qabo aabihiis kadibna u gudbiyay Riccardo kadibna isaga. Xaqiiqda uu ka qabo ilmanimadiisa, Roma ayaa ku jirta dhiig iyo nasiib darro Francesco Totti iyo qoyskiisa.
Inkastoo cunug ahaan, Totti ma uusan helin kulamo badan oo Roma ah oo ku saabsan telefishanka. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ciyaaruhu aysan ku muujinin 80. Xilliga ugu farxada badan ee Totti's Family ayaa markhaati ka ahaa markii tikidhada Roma ay iibsadeen aabihiis. Tani waxay qof walba fursad u siinaysaa inay booqdaan Stadio Olimpico.
Sida Totti u dhigo;
Ma aanan helin daawashada cayaaraha badan ee TV-ga sababtoo ah xitaa Rome ma aysan hadlin mar walba '80s. Laakiin markii aan ahaa toddoba sano, aabbahay ayaa tikidhada helay. Waxaan xiri karaa indhahayga oo waxaan xasuustaa dareenka. Midabada, codadka, bamka qiiqa ayaa baxaya. Anigu waxaan ahaa ilmo aad u da 'yar, waxaan ku jiraa garoonka dhexdiisa dhamaan taageerayaasha kale ee Roma ayaa dabooli jiray wax igu dhex jira.
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Dhismaha Xirfadaha
Xitaa sida wiil yar, kubadda cagta ayaa ka badan kaliya jacaylka kubada cagta Totti. Dhamaan qolka jiifka, Totti wuxuu heystey sawirro iyo wargeysyo Gianni, kabtankii hore ee Roma iyo mentor. Sida ciyaartoyda ugu badan ee kubada cagta, Totti ayaa xiiseynaya kubada cagta isagoo arkay kubada cagta wadada oo leh caruur kale oo weyn.
Waxa uu ahaa gurigiisa oo uu ku xardhan yahay xirfadihiisa kubada cagta. Totti ayaa sii watay xirfadihiisa kubada cagta ee hoosta Via Vetulonia, oo ah wadada ka dambeysa koonfurta Rome ee coliseum iyo basilicas.
Kulanka: Maalin maalmaha ka mid ah, qoyska Totti ayaa fasax u ahaa magaalada xeebta ee Torvaianica, qiyaastii nus saac oo ka yimid bartamaha Rome. Lorenzo, aabihiis, ayaa arkay koox ka mid ah ciyaartoy yar oo siddeed jir ah oo ciyaaraya kubadda cagta. Waxa uu sii waday inuu weydiiyo haddii wiilkiisa uu ku biiri lahaa ciyaarta.
"Waa mid aad u yar,"
waxay sheegeen inay ku adkeysanayaan in Totti oo afar sano jir ah uu dhaawac u geysan karo.
Ka dib markii uu ku qanciyay Lorenzo, wiilasha ayaa isku raacay in Totti uu la ciyaarayo iyaga. Totti oo qarka u saaran inuu xirto gaabnihiisa cas iyo shaati cad oo la yiraahdo No: 4 daafaca bidix ayaa ka tagay dhamaan ciyaartoyda garoonka ka dib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah. Iyada oo uu ka yar yahay ama aysan jirin iska caabin waalidkiis, wuxuu sii waday xirfadihiisa xirfadiisa.
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Soo-koobidda Xirfadaha
Francesco Totti, oo da'diisu tahay sideed sano, ayaa waalidkiis ku qorey liiska kooxda dhalinyarada ee deegaanka, Fortitudo Luditor, oo ku yaala Rome. Ka dib markii uu sanadkaasi ciyaaray, waalidiinta Totti ee 1984 ayaa bilaabay inay u wareejiyaan wiilkooda Smit Trastevere halkaas oo uu u ciyaaray labo xilli oo kale.
Isagoo ka sareeya kaalinta dhalinyarada ee kooxda, Totti ayaa noqday mid la dareemo weyn, xitaa geesi carruureed, Giannini. Ermenegildo Giannini, aabaha dhalay Giuseppe Giannini wuxuu ahaa wakhtigaas mas'uul ka ahaa waaxda dhalinyarada ee Rome. Wuxuu hore u maqlay maqaayad cireed, midab leh iyo mid aad u xirfad leh, sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu soo booqdo kooxdiisa oo uu daawado isaga ciyaar.
Dhamaadkii ciyaarta oo uu daawaday, Ermenegildo Giannini ayaa ku soo biiray Totti wuxuuna yiri:
"Waxaad ii xusuusineysaa wiilkayga, waxaad noqon doontaa horyaal sidii hore ah".
Ka dib talooyin ka yimid Ermenegildo, Totti ayaa go'aansaday inuu u guuro Lodigiani, oo ah koox kale oo dhalinyaro ah oo ku nool magaalada 1986. Xirfaddiisa iyo tayadiisa, iyo sidoo kale awoodiisa uu u leeyahay inuu xalliyo xaaladaha, wuxuu u arkay inuu yahay indha indheynta kooxaha kooxaha ugu sareysa ee Italy oo dhan.
Diidmada wayn: Sannadkii hore 1989, markii Totti uu ahaa 13, waxaa soo galay albaabka gurigiisa oo ku yaala Rome. Hooyadii Totti, Fiorella, ayaa u jawaabtay. Dadka dhinaca dhinaca kale ee albaabku u maleynayeen in ay qeexayaan xirfaddiisa kubada cagta. Markii Fiorella la furay albaabka, koox ragga ah oo xiran casaan iyo madow (oo ka dhigan AC Milan) ayaa isku soo daray agaasimayaal kubada cagta. Waxay rabeen Totti inuu ciyaaro kooxdooda wixii kharash ah. Sida laga soo xigtay Totti;
Hooyaday ayaa gacmaheeda kor u taagay ka dib markii ay maqleen nimankan. Maxaad u maleyneysaa in ay ku tidhi ninkeeda? Marka aad tahay ilmo ku nool Rome, waxaa jira laba ikhtiyaar oo kala ah: Waxaad tahay mid casaan ah ama buluug ah. AS Roma ama Lazio. Laakiin qoysaskeena, waxaa jiray hal doorasho oo keliya ee suurtagal ah ee dhiigeena iyo nafta. Taasi waa Roma.
Hase yeeshee, arin kale ayaa yimid markii kooxdii dhalinta yareyd oo uu Totti ku ciyaaray markii hore ay isku afgarteen inuu iibiyo kooxda Lazio, oo weli ku taal Rome. Nasiib wanaag, Roma ayaa isla waqtigan isku wacay. Totti ayaa aqbalay Roma, ugu dambeyntiina wuxuu noqday ciyaaryahankii hore ee Giuseppe Giannini, waxaana uu sii joogi lahaa kooxda sanadka xiga ee 24. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Nolosha Xiriirka
Sheekada Gaaban: Ilar ma siineynin Totti fursad weyn oo uu ku ogaanayo iyada oo uu helay hab ay kuugu soo jiidato gabadha.
Totti ayaa hubiyay inuu gool dhaliyey kulankii Roma Vs Lazio. Ka dib markii uu gool dhaliyey, ayuu u orday garoonka geeska si uu u muujiyo shaati "6 gaar ah!" taas oo Ilar sidoo kale ku lahaa iyada. Marka la eego, micnaheedu waa "Waxaad adigu leedahay".
Tani waxay ka dhigtay qurux qurux badan Lahi jacayl iyo ugu dambeyntii aqbalay inay taariikhda isaga.
Totti ayaa maanta si farxad leh u guursaday xaaskiisa, Llary Blasi oo ah marti-qaadayaal hore oo TV ah. Ilary Blasi waa fanaani hore oo ahaa marti-geliyaha Talyaaniga 1 oo muujinaya bandhiga Le Iene tan iyo 2007. Lammaanuhu waxay ku dhaarteen dhaar isqaba oo ku saabsan 19th Juun, 2005 ee Basilica ee Santa Maria ee Aracoeli.
Arooskoodii waxaa lagu soo duubay telefishanka iyada oo macaashka lagu deeqay sadaqo. Wakhtiga qorista, waxay ururkooda ku barakadeen saddex carruur ah. Wiilka ugu wayn ee Totti Cristian wuxuu ku dhashay 6th of November 2005. Cristian ayaa sabab u ah dabeecadda farsamada jilicsan ee Totti kaasoo yimid wax yar ka dib markii uu ku dhashay.
Labadaba jecel yihiin gabadhoodii ugu horeeyay ee Chanel, oo ku dhashay 13th May, 2007. Ilmahooda saddexaad, Isabel wuxuu ku dhashay 10th of March, 2016.
Ma ogeyd??... Haddii aad rabto inaad fasax hesho Totti & qoyska fasax, ka dibna waa inaad tagtaa Sabaudia, oo ku taal gobolka Latina, 100 km oo ka socda Rome. Waa wax caadi ah in la helo dabaasha ama ku dhowaad xeebta yar oo ku taal xeebta.
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Life Relationship hore
Ilaa gabadha noloshiisa, Francesco wuxuu ku jiray dhowr nooc. 1992, marka da'da 15, Totti wuxuu ahaa jacaylkiisii ​​koowaad. Wuxuu bilaabay inuu la hadlo Marzia Silvestri, oo ah ciyaaryahan kubadda laliska ah.
Wareysi uu siiyay Corriere Della Sera ee 1996, Totti mar ayaa la sheegay;
"Aniga iyo Marzia waa ay isguursadeen" 98, dhamaadka qandaraaskeyga Roma. Waxaan wada joognay sanadaha 4, arooskuna wuxuu noqonayaa fursad uu kaga baxo guriga. Xilligan, ma doonayo inaan ka tago qoyskeyga. Saaxiibadayadu waxay badalaan saaxiibbadooda sababtoo ah waxay leeyihiin fursado badan oo ay kula kulmaan dad cusub. Aniga ahaan waa kala duwan tahay, ka dibna waan ku jiraa jacayl, maxaan u bedelayaa? Iyada oo aan rabo inaan dhiso qoys. "
Warqadda kor ku xusan waxay ahayd keli ah markii xiriirkoodu dhammaaday Juunkii sanadka soo socda. Ilaa inta la ogaanayo Llary Blasi ee 2002, haweeneydii nolosheeda, Francesco waxay soo koobtay qaababka quruxda badan ee soo socda; Manuela Arcuri (2001), Maria Mazza (2000 - 2003) iyo Flavia Vento (2005).
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Ahaanshaha Ku-Xigeenka Rome
Totti ayaa xajiyey daacadnimadii Roma, inkastoo uu ka yimid kooxo waaweyn, oo ay ku jirto Real Madrid, si ay ugu ciyaaraan iyaga. Isagoo ka hadlaya noloshiisa oo dhan Rome, mar buu yiri;
"Dadku way i weydiinayaan, sababta noloshayda oo dhan ku dhex nool Rome?
Rome waa qoyskeyga, asxaabtayda, dadka aan jeclahay. Rome waa badda, buuraha, dhismayaasha. Rome, dabcan, waa Rooma. Rome waa jaalaha iyo casaan. Rome, aniga i, waa dunida. Naadigan, magaaladan, waxay aheyd nolosheyda. "
Totti jaceylka Rome, iyo sidoo kale Roma, wuxuu arkay isaga oo abuuraya dammaanad ka badan kubadda cagta iyo sida tan lagu dabaaldagayo halyo qaran oo leh heeso iyo qeybo munaasab ah oo loogu talagalay isaga. Waxa uu udub dhexaad u yahay ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee Talyaaniga iyo Roma ee ka dhexjiray taageerayaasha sababtoo ah dhaxalka uu yahay "hal naadi koox".
Markii uu ciyaaraha ka fariistay, adduunku wuxuu go'aansaday inuu abaalmarin u bixiyo shaatigooda 10 iyo captain Romanista. Waxaan kuu soo bandhignaa Totti khudbaddiisa shucuurta ee buuxa. Iska ilaali hoosta;
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Magacyada
Totti ayaa inta badan nasiib u helay naadigiisa taageerayaasha oo xusay qaab ciyaareedkiisa kubada cagta iyo sidoo kale kubada cagta kubadda cagta.
Naanaysta Il Gladiatore (Gladiator) wuxuu u yimid sababtoo ah adkeysigiisa iyo jihada dagaalka. Tani waxaa lagu arkaa sawirka sawirkiisu hoos ku yaal.
Inuu haysto Gladiator ee gacanta uu yahay waa tii ugu horeysay ee Francesco. Tattoo Tani waxay timid ka dib markii uu kufsaday uu la lahaa saaxiibkiisa Claudio Amendola. Labada dhinac waxay isku raaceen markii Rome ay ku guuleysatay Scudetto, waxay ku garaaci lahaayeen gawaarida gacantooda midig. Maalinta guusha ka dib, labadooduba waxay u baxsadeen studio Gabriele Donnini, oo ah magaalada ugu caansan ee tafaasiga ah. Hoos waxaa ku yaal sawir qaade Totti oo isku dayaya Tattoo ee ugu horeeyay.
Totti ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay "Boqorka Roomaanka ah ee aan waxba galabsan". Tan waxaa lagu sharxay sawirka hoose.
Naan kale oo kale Er Bimbo de Oro (Wiilka Dahabiga ah) ayaa la siiyay isaga sababtoo ah waa ciyaaryahanka ugu qiimaha badan Roma.
Totti ayaa helay naaneyska 'Er Pupone' (turjubaan bilaash ah oo micnihiisu yahay Bebezo). Magacani wuxuu ka yimid wakhtigiisii ​​dhalinyarada markii uu Totti uu ka yaraa ciyaartoyda. Magaca Ingiriisku macnaheedu waa "Ilmo weyn"
Ugu dambeyntii, on naannooyinka, Totti ayaa loo yaqaan- Il Capitano (Captain The) taageerayaasha uu u yahay hogaamiyaha kooxda sanado badan.
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh - Nolosha Qoyska
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Qoyska Totti: Wuxuu caadi ahaan ku baaqaa hooyadiis "mamma mia ". Isagoo sharxaya hooyadiis, Totti mar ayaa tiri;
My Mamma wuxuu ahaa madaxa. Wali waa madaxa. Oo iyana waxay ku tiirsanayd wiilkeeda, aynu dhahno. Sida hooyo talyaani ah, waxay ahayd wax aad u adag. Ma rabto inaan guriga ka baxo oo aan ka baqo inay wax dhacaan.
Hooyadii Totti ee baratay ayaa baratay wiilkeeda. In gurigiisa uu yahay waxa ugu muhiimsan nolosha. Dabadeed Fiorella Totti ayaa ahaa midkii wiilkeeda u kaxeeyey inuu ku tababaro. Sababta ka baxsan, waxay sugi lahayd isaga. Waxay sugi karaysay labo, seddex, mararka qaarkood afar saacadood halka Totti uu tababari doono. Fiorella ayaa sugi lahaa roobka, qabow, ma ahan mid muhiim ah.
Walaal: Ma ogtahay ??. Waxaa xooga saarnaa Riccardo markii uu ka hadlayey kubada cagta Totti. Riccardo, oo ah wiilka ugu da'da weyn, iyo walaalkii weyn ee Totti ayaa ku ciyaaray caajis.
Aabahood, Enzo, marnaba wax badan kama helin Francesco yar oo lix sano ka yar walaalkiis. Riccardo wuxuu u yimid inuu ka ciyaaro qeybaha asaasiga ah ee Rome, laakiin waxaa lagu dhajiyay walaalkiis yar, Francesco. Maanta, wuxuu hadda guddoomiye ka yahay ASD Totti kubadda cagta ee uu leeyahay Francesco walaalkiis yar.
Francesco Totti Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh -Xaqiiqooyinka Shakhsiga / Xirfadaha
Markii Totti uu ku guuleystay koobkiisii ​​hore ee kubada cagta: Roma, inta lagu jiro sanadihii hore ee Totti. Had iyo jeer waa dhaqan gaar ah oo ku saabsan 5 iyo 6th ee Janaayo.
Gabadh gabdhan oo magaceeda la yiraahdo Befana (oo loo yaqaan 'Version of Santa') waxay ku dhex jirtaa dhamaan guryaha waxayna ka baxaan nacnac iyo waxyaabo kale oo loogu talagalay carruurta u dhaqmey si wanaagsan ama dhuxul oo kuwa u dhaqmey si xun. Sanadihii hore 3, Totti ayaa ku guuleystay abaalmarintiisii ​​hore ee Befana: kubad kubada cagta ah. Habeen walba wuu seexday.
Carruurta badankood, tani waxay tahay sida ay u dareemayso sida muuqata iyo qabashada Totti markii ugu horeysay.
Totti ee macmacaanka iyo jalaatada iyo jacayl gaar ah oo loogu talagalay ardayda Labrador. Waxa uu leeyahay eyda 6 sida waqtiga qorista. Francesco mar ay go'aansatay in ay ku deeqdo laba eey oo dugsi badbaadin ah iyaga oo loo tababaray sidii loo caawin lahaa dadka dhibaataysan badda.
Eeykiisa Ariel mar kaliya wuxuu badbaadiyey laba qof, haween ah sanado 60 iyo gabdho ah 8, xeebta Sant'Agostino.
AS Roma AS ayaa haatan ku sharfeysa kubad sameeyaha Francesco Totti oo leh Tattoo MASSIVE. Hoos eeg!!
Totti: Waqtigaa markaad ogaato waxaad ku jiri doontaa jirkan nin jirkiisa ah.
Kooxda riyada ee Francesco Totti waa sida soo socota: Buffon, Maicon, Candela, Samuel, de Rossi, Xavi, Iniesta, Totti, Cristiano Ronaldo, Messi iyo Ibrahimovic. Arinta xiisaha leh, Totti ma uusan dooran tababare inuu xiro liiska. Totti ayaa ka fiirsanaya Gianluigi Buffon mid ka mid ah saaxiibada ugu yar ee uu ciyaaray kubada cagta. Labadaas waxay ku kulmeen xilligii ay 15 ku jireen.
Saaxiibada kale ee lala xiriirayo xiriirka joogtada ah waa Alessandro Nesta, Vincent Candela, Cristian Panucci, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso iyo Alessandro Del Piero, kaasoo uu fariin u diray fariin joogto ah, inkastoo ay xafiiltamaan hore ee garoonka dhexdiisa.
2004, Totti waxaa lagu magacaabaa FIFA 100, liiska ciyaartoyda ugu weyn adduunka ee adduunka Pelé, iyadoo qeyb ka ah dabaaldegyada FIFA ee sanadka.
Totti xilli ciyaareedkan, wuxuu heystaa rikoorka gooldhalinta ugu weyn taariikhda UEFA Champions League, da'da 38 iyo maalmaha 59.
Hantida FACT: Waad mahadsantihiin akhrinta nooca Francesco Totti Sheeko Carruurnimo iyo Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha. At LifeBogger, Waxaan ku dadaalnaa saxnaanta iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Taariikhda Kubadda Cagta Talyaaniga
John fyucha Nofembar 23, 2018 XXX: 2 pm
Boqorka Roomaanka ah ee aan waxba galabsan